China Gel anya mkpuchi ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Huanyi
Mkpịsị ọkụ na oyi na-atụ, reusable, Ọ dịghị leakage, Na-adịghị egbu egbu
Size: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm
Arọ: 120g, 130g, 160g, 180g
Ejiri maka ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ na oyi na-enyere aka belata anya azịza, anya nro, anya erughị ala, mpụga, na-enye enyemaka na-enweghị ọgwụ. Enwere ike iji ya dị ka mkpuchi anya na-ekpuchi ọkụ na ụlọ ụlọ.
Ọ na-egosi dịka nkpuchi, ọ nwere ike iji ya dị ka mkpuchi anya dị jụụ, mana amachila echiche gị. Ngwaahịa a bụ isi maka mpikota onu na-ekpo ọkụ ma ọ bụ mkpakọ oyi, yabụ ị nwere ike itinye ya n'akụkụ ọ bụla nke ahụ. Na eriri, enwere ike ịgbakwunye ya na ikpere, ikpere, nkwonkwo ụkwụ na nkwonkwo ndị ọzọ chọrọ ka mpikota onu dị ọkụ. Ngwaahịa a bụ ihe eji arụ ọrụ ịhịa aka n'ahụ nke ọma, ịgaghị agbaghara ya.
RELIEVING COOLING GEL EYE MASK: aking na-eteta ụra ike gwụrụ na ọzịza nke jupụtara n'ọchịchịrị abụghị mmalite kachasị mma n'oge ọ bụla. Ihe nkpuchi anya ice jel na-ebelata obi ilu, gbaa mbọ zuru ike!
MGBE ANYA NA-AH S EGO: Izu oyi maka anya puffy na-enyere aka belata ihe mgbu na mbufụt nke enwere ike ibute n'ihi ọtụtụ nsogbu ahụ ike ndị ọzọ. Gel bead jụrụ anya nkpuchi na eriri eriri.
AKW HKWỌ AKW &KWỌ AKW &KWỌ AKW &KWỌ AKW :KWỌ: A na-enwe ike ịchọta oyi mkpuchi mkpuchi jel maka mgbatị dị ka ma ọ bụ na-ekpo ọkụ maka ọgwụgwọ ọkụ. A na-eji mkpuchi anya jelii oyi jelụ na-eji nwayọ na-anọdụ ala n'anya gị.
Atụmatụ na-ekpo ọkụ
Ma ị na-eji ya maka ọgwụgwọ ọkụ ma ọ bụ oyi, ọnọdụ okpomọkụ ekwesịghị ịdị oke ọkụ ma ọ bụ oyi. Zere ọrụ nke imebi ngwaahịa na imebi gel beads.
Nke gara aga: akpụ akpụ
Osote: mmanya oyi akpa
Oyi gel mpikota onu
Gel Anya mpikota onu
Gel Anya nkpuchi
Gel na-ekpo ọkụ ọkụ maka anya
Hot jel Eye Compress
Gel anya mpikota onu nkpuchi